Chitsauko Chipiri | Faraitose's Blog
Tikavamba nekuongorora mwoyo yemhuka dzinenge dzichimhenyu panenge pavhurwa chipfuva nenhumba yemwoyo yatsemurwa, tinoona kuti mwoyo wacho unenge uchiti ukamboti tambe womira; ukamboti nekanguva fambe, nekamwe rege. Izvi hazvinetse kuona pamhuka dzakaita sezura, nyoka, datya, hozhwa kana hove diki, idzi mhuka dzinotonhora miri [miritonho]. Zvino nyatsoonekao mumhuka dzinodziya miri [miridziya] dzakaita senguruve kana imbga, uka nyatsotarisisa mwoyo paunenge wavakuneta, wotanga kurova muchinono, zvatingatoti paunenge wavakufa. Apa chokwadi unonyatso ona pachena chaipo kuti kurova kwawo paunenge wavakunonokera, uchirova zvinenguva, nguva yaunenge wakamira ichirebao. Apa zvino unganyatso ongorora uchifakaza zvine nyore kuti marovero anoita mwoyo chii chaizvo, nekuti anotanga sei achiguma sei. Kana mwoyo waka mira, zvaunoita kana wafa, mwoyo unonge wakarukutika, usina simba, wakati zhurukutu.
Maererano nekurova kwawo, zvinhu zvitatu zvatinga nongedzere:
· Kana uchirova unosimukira pakuurungana kwaunoita uchibva waita kumhuno kunogumha madziro echipfuva zvekuti ukaisa ruoko pachipfuva nekunze mwoyo unonzwika uchigugudzira.
· Saka zvinenge zvinoonekera kuti mwoyo unoita zvekugwinha kunoita kuti udupuke mativi uchireba nekutetepa muhurefu hwawo. Mwoyo we nyamatsatsi ukatorwa uchiri kurova wonyatso radzikwa pagwati kana muruwoko izvi zvinonyatsooneka. Kana munedzimwe hove diki dzine mwoyo yakareba zvino nyatsooneka.
· Paunenge uchirova mwoyo ukabatwa neruoko unoonekwa kuti unenge wakakunga kugwinha, kuoma kunoitiswa nerusimba rwaunenge uchiita. Kukunga uku kwakafanana nekunoita tsandanyama muruoko kugokora ukafambisafambisa minwe.
· Uyezve, zvinooenkwa muhove nedzimwe mhuka dziri miritonho senyoka, matatya nedzimwewo kuti mwoyo wacho unobva wachenuka paunenge uchirova, wozonyatso tsvuka paunenge uchizorora.
Saka zvinenge zviri pachena kwandiri kuti kurova kunoita mwoyo kugwinha kwaunoita rutsandanyama rwawo rwuchikakatira zvinoita kuti ubve wakunguka. Izvi ndizvo nekuti pauno rova unoita zvekusimukira, wosimbarara, wopfumba nekuomarara zviri zvimwechete sezvinoita tsandanyama irikukakatira. Tsandanyama iri kukakatira inosimbarara, yodupuka painokunga, yanga iri mutebvenyu yoomarara, yosimukira ichifuta: ndizvo zvimwe chetezvo zvinoita mwoyo.
Pane zvataona izvi tingakwanise kuti pano rovamwoyo uchiita mudiki, mativi awo anokora mukana urimukati uchiita mudiki zvinoita kuti ropa ririmo ribva rasundidzirwa richibuda. Ongororo yedu yechina pamusoro inoti ratidza kuti kuchenuruka kunoita mwoyo, kushaya ropa rinenge rabudiswa; paunozorora, usiri kurova, ropa rino pinda zvakare wotsvuka zvakare. Hapana angambo zviramba izvi kana akamboona ropa iri richipfichuka pakurova kwegakwega richibuda mumwoyo unenge wabaiwa muninga yeropa [ventricle].
Saka panguva imwecheteyo izvinoitika ndezvizvi: kugwina kunoita mwoyo, kugugudzira kunoita mwoyo pachipfuva [izvi zvinonzwika neruoko kunze kwechipfuva], kufuta kunoita tsandamwoyo, kusundairwa kunoitwa ropa rinenge riri mumwoyo richibuda panogwinha maventricles.
Saka izvi zvinopikisa zvino tendera vanhu vazhinji. Vazhinji vanoti panonzwika mwoyo kurova unenge uchito zara neropa rinoita kuti urovere pamadziro echipfuva. Taona kuti zviripo ndezvekuti mwoyo unenge uchito buritsa ropa pauno rovera pachipfuva. Saka kurova kunoitamwoyo kunowanzo fungwa kuti ruregerere, kunotonge kuri rusimba. Sezvo, chikuru pakutamba kunoita mwoyo hakusi kuzorora kwaunoita [ruregerere] asi rusimba nekuti ndipo pauno gwinha, uchifamba uchisimbarara.
Pane pfungwa yekuti mwoyo paunorova uchiurungana mukana urimukati unotokura wokweva ropa. Izvi zvinotsanangurwa nevamwe vachiti itambo dzeurefu hwemwoyo chete dzino kakata dzichidzosa magumo emwoyo kuudupukisa, tambo dzinotenderera [sembariro] dzichi tembanukira kuti mwoyo ubva waita kunge chikweva. Izvi zvese totoramba nekuti tambo dzeurefu padzinokakatira umhuno hwemwoyo, dzerutenderera dzinokakatawo, dzichifuta nekukunga zvinoita tsandanyama yose kanaichigwinha: izvi zvino dupikisa mukana mukati memwoyo.
Hazvina chokwadi kuti mwoyo uno kweva ropa nekurova kwaunoita kana kuti nekufuta kwaungaite. Paunenge uchi buritsa ropa unetenge uchigwinha, paunenge uchizara neropa ndipo paunenge uchitozorora. Tichazonyatso zviongorora mushure.